Muxuu CC Sharma’arke ka yiri shirka wada-tashiga ee doorasho... - Axadle Wararka Maanta
Muxuu CC Sharma’arke ka yiri shirka wada-tashiga ee doorasho…
Muqdisho (Axadle) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa boggaadiyey wada-hadallada doorashooyinka ee ka bilaabanaya gudaha Caasimadda Muqdisho, kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Shirka arrimaha doorashooyinka oo ka dhacay Teendhada Afisyoone ayaa lagu wadaa inuu maanta si rasmi ah u billowdo, waxaana ka qeyb-galay madaxweynaha, ra’iisul wasaaraha, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo hoggaamiye shanta maamul goboleed ee ka jira dalka.
Shiweynahan oo kusoo aadayo, xilli xasaasi ah lagu wadaa in laga soo saaro go’aanno culus oo lagu jiheynayo doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2021-ka, si looga gudbo marxaladda adag iyo xaaladda kala guurka ah ee ay haatan ku jirto Soomaaliya.
Beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale isha ku wada-haya natiijada ka soo baxda shirkan oo si aad ah loogu boggaadiyey xukuumadda ra’iisul wasaare Rooble.
Soomaaliya ayaa waxaa ku daba-dheeraaday ka gudubka marxaladda adag ee kala guurka ah, waxaana dhammaaday muddo xileedkii dowladda dhexe, iyadoo aan heshiis rasmi ah laga gaarin hannaanka lagu wajahayo doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2021-ka.
The United States is targeting Eritrean and Ethiopian officials over the Tigray genocide